News Desk – Classic Khabar
May272021 by News DeskNo Comments
बडिमालिका नगरपालिका–२ माझीगाउँमा नाबालक चार भाइबहिनी अलपत्र परेका छन् । आमाको मृत्यु र बुवाले अर्को बिहे गरेर भारत गएपछि चार भाइबहिनी अलपत्र रहेको वडाध्यक्ष डम्मर महतले बताउनुभएको छ । अलपत्र पर्नेमा सात वर्षीया करुणा नेपाली, छ वर्षीया कोपिला नेपाली, चार वर्षीया स्माया नेपाली र तीन वर्षीय धुव्रराज नेपाली छन् । आमा रेखा दमाईको उपचारका क्रममा दुई वर्ष पहिला भारतमा मृत्यु भएको थियो भने बुवा विनय नेपालीले अर्को बिहे गरेर भारत गएपछि अलपत्र रहेका वडाध्यक्ष महतको भनाइ छ । यतिबेला नाबालक चार दलित भाइबहिनी बुढा बाजे अर्जुन दमाई र बज्यै बिस्नाको संरक्षणमा रहेका छन् । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको अर्जुन दमाईको परिवारलाई नाबालक नाति नातिनी पाल्न निकै समस्या भएको छ । गाउँभरि डुलेर अरुसँग मागेर नाति नातिनाको पेट भर्ने काम गरेको बज्यै बिस्ना बताउनुभयो । कहर बढेसँगै लकडाउनका कारण उनीहरुमा झनै सम
May262021 by News DeskNo Comments
धादिँगको बैरिनमा जन्मेका शिशिर भण्डारीको वास्तविक जीवनकथा बाहिरिएको छ । शिशिरले आफ्नो नयाँ युटुब मार्फत आफ्नो सँघर्षशिल जीवनकथा सुनाउँदै भाजवुक बने । गायक बन्ने रहर र गीत सुन्दै बितेको उनको बाल्यकालमा उनी निकै अन्तर्मुखी रहेको बताएका छन् । साथीहरुसँग घुलमिल नहुने, बाहिर त्यति नडुल्ने घरमै बसेर अनेक खोज गर्ने उनको स्भाव थियो । उनले धेरै रेडियोहरु बिगारेका छन् र भत्काएका छन् । उनी सानैदेखि रामकृष्ण ढकालको फ्यान थिए, उनका गीतहरु गुनगुनाउँथे र उनकै आवाज निकाल्ने प्रयाश गर्दथे ।शिशिर डाक्टर बन्न काठमाडैं आएका थिए तर त्यो उनको रहरको बिषय भने थिएन, परिवारको दबावमा साईन्स पढ्न काठमाडौं आएका शिशिरले काठमाडौंमा धेरै सँघर्ष गरे र मिडियामा प्रवेश गरे । रेडियो, टेलिभिजन हुँदै उनी हाल युट्युबमा बिभिन्न सामाजिक उद्येश्यका कामहरु गर्दैछन् । शिशिरले आफ्नो युटुब च्यानलमा बताएको आफ्नो वास्तविक जीवन क
सार्वजनिक चासोको बारमो अभिनेता राजेश हमाल सितिमिति मुख खोल्दैनन् । लामो समय सामाजिक सञ्जालबाट टाढा रहेका हमाल सामाजिक सञ्जालमा ज्यादा जसो समय आफ्नो जिउ देखाउन रुचाउँछन् । उनले हाल्ने पोस्टमा आफ्नै फोटोको बाहुल्य हुन्छ । यदाकदा भने सार्वजनिक चासोको बारेमा पनि बोलेको सुनिन्छ । आइतबार साँझ हमालले लामो भिडियो पोस्ट गरे । भिडियोमा उनले सरकार कोभिड १९ सिर्जित महामारीका सम्बन्धमा नेपालको राजनीति उदास रहेको टिप्पणी गरे । उनको भनाइ थियो ‘बेलायतको संसदमा नेपालले कोरोना भाइरसका कारण भोगिरहेको विपत्तिको विषयमा चर्चा चल्यो । तर हाम्रो संसदमा किन यो विषयको चर्चा मैले सुनिँन ।’ ८ मिनेट लामो भिडियोमा हमालले भनेका छन्, ‘केही दिन अघि ब्रिटिशको संसदमा भएको छलफल सुन्ने मौका पाएको थिएँ । त्यहाँका सांसदले बेलायतका उपप्रधानमन्त्रीलाई भाइरसको नयाँ भेरियन्टले नेपालमा पारेको क्षतिबाट निस्कन के कस्तो सहयोग गरि
कामाठमाडौंको गोठाटारमा भएको एक भिडियो अहिले सामाजिक सजालमा भाइरल भएको छ । जसमा सुकुम्बासी माथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको देखिएको छ । प्रहरीको समुहसंग क्यामेरा लिएर पुगेका संचारकर्मीको पनि वि वा द भएको भिडियोमा देखिएको छ । सुकुम्बासी माथि भएको प्रहरी दमनको भिडियो संकलन गर्न पुगेकाहरुको क्यामेरा प्रहरीले खोसेको भन्दै वि वा द भएको हो । प्रहरीले सुकुम्बासी लाई बल प्रयोग गरेको पनि भिडियोमा देखिन्छ । महामारीका बीचमा सुकुम्बासीलाई घरवार विहिन बनाएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ । सुरक्षाकर्मीको टोलीको नेतृत्व गर्दै पुगेका प्रहरी नायव निरिक्षकले नै क्यामेरा तो ड फो ड गरेको भन्दै प्रहरीसंग वि वा द भएको भिडियोमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । गोठाटारको बाग्मती नदि किनारमा झुपडी बनाएर बसेकाहरुलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा अ ति क्र मण गरेको भन्दै प्रहरी टहरा भत्काउन पुगेको थियो । त
महामारीका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दिनहुँ कमाएर भोक मेटाउने विपन्नहरुको जिवन निकै दुखद् छ । सरकारले महामारी फैलने क्रम रोक्न भन्दै निषेधाज्ञा थपिरहेको छ । तर विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गरेर कमाउने र त्यसैले भोक मेटाउनेहरुका लागि भने प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । जसका कारण उनीहरुको बिचल्ली भएको छ । विपन्न, सुत्केरी र अनाथहरुको बिचल्ली भएको हो । मजदुरहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुको चुलो बल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक रुपमा लागेका अभियन्ताहरुले सहयोग गर्ने क्रम भने जारी छ । उनीहरुका कारण भोकै बस्नुपरेकाहरुले सडकमै खान पाएका छन् । धेरै सामाजिक अभियन्ताले घरमा बनाएका खाना सडकमा आएर विपन्नहरुलाई वितरण गर्ने गरेका हुन् । उनीहरुले गरेको सहयोगको खाना खान हजारौंको लाइन लाग्ने गरेका छन् । त्यसरी अरुले दिएको सहयोगको खानेकुरा खान आउनेहरु कतिपय धरधरी रोएको देखिन्छ । साना
पहिलाको जमानामा छोरीलाई सन्तानको ब्यवहार गरिन्थेन । छोरी भनेको अर्काको घर जाने जात हो भन्ने मानसिकता बुवाआमामा हुन्थ्यो । त्यस्तै अवस्थाको सामाना गरेकी एक महिला अहिले आफ्नो मृत्यु कुरेर बसेकी छन् । बुवाले ७ वटा सौता माथि जबरजस्ती विवाह गरिदिए । विवाह गर्न नमान्दा खुकुरी देखाएर धम्की दिए । बुवाको डरले उनी ८ औं श्रीमती बन्न पुगीन् । आफ्नो बुवा समानको उमेरको श्रीमान थिए । आफु भन्दा अगाडी ७ वटा सौता । त्यस्तो परिवारमा बुवाले धम्की दिएर विवाह गरिदिए । उनको श्रीमानको उमेर उनको भन्दा ४० वर्ष बढी थियो । भन्छिन् मेलाई गरेको अन्यायका कारण मेरो माइतीमा पनि कहिल्यै राम्रो भएन । सिनामंगलमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने एक महिलाको कथा हो । अहिले उनी एक्लै जिवन विताइरहेकी छन् । उनको अवस्थाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले उनका लागि विदेशवाट सहयोग आएको गंगा लामाले बताएकी छन् । आफ्नो इच्छा विपरित विवा
महामारीका समयमा दैनिक ज्यादारी गरेर खानेहरुको विजोग भएको छ । सामाजिक सजालमा अहिले एक जोडीको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जहाँ युवती गर्भवती छन् । उनले दुई दिन देखि खान नपाएको बताउँछिन् । भिडियोमा उनका पति पनि संगै छन् । अस्ती दुई दिन भोकै बस्यौं कुनै उपाय छैन गर्भवती श्रीमतीलाई कसरी जोगाउने ? उनी निकै चिन्तित देखिन्छन् । गर्भवती युवती भन्छिन्, निकै पेट दुखेको छ , अलिकति पैसा भए खानेकुरा किन्न हुन्थ्यो । अहिले त यस्तो अवस्था छ सन्तान जन्मिएपछि कसरी हुर्काउने होला ? निकै चिन्ता लागेको छ । गर्भवती अवस्थामा पोशिलो खानेकुरा खानुपर्ने अवस्थामा उनले दुई छाक खाना पनि खान पाएकी छैनन् । उनीहरु दैनिक ज्यालादारी गरेर भोक मेटाउने परिवार हो । भएको दिन एक छाक खाना बनाउँछौं दुई जनाले बाँडेर खान्छौं । अहिले सम्म कोठामा भएको खानेकुरा सकियो । दुई दिन देखि केही खान पाएका छैनौं त्यही भएर तपाईहरुलाई बोलाएका
उपचार नपाएर आफ्नो बुवा गुमाएका स्ट्याण्ड–अप कमेडियन आदर्श मिश्राले निकै भावुक सन्देश जारी गरेका छन् । बुवाको निधन भएको भोलीपल्ट उनले एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै अस्पतालको लापरवाहीका बारेमा खुलासा गरेका छन् । उनले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीका कारण आफ्ना बुवाले संसार छोड्नुपरेको बताएका छन् । मृगौला खराब भएर फेर्नका लागि लामो समयदेखि प्रयासरत बुवा विनोद मिश्राको उपचारका क्रममा उनले आफुले भोगेको पीडा उनले निकै भावुक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । देशको स्वास्थ्य प्रणालीका कारण मानिसको कसरी मृत्यु भइरहेको छ भन्ने कुरा उनले प्रष्ट खुलाएका छन् । पैसाको अभावले नभएर देशको स्वास्थ्य प्रणालीका कारण आफ्नो बुवाको निधन भएको बताएका छन् । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालका कारण आफ्ना बुवाको निधन भएको उनको भनाई छ । एनएमसीका सञ्चालक बसरुद्धिन अन्सारी असाध्यै शक्ति
May252021 by News DeskNo Comments
नेपाली कलाकारहरु मध्ये कहिल्यै पनि बिबादीत नबनेका महानायक राजेश हमाल हुन् । उनी सबैभन्दा कम सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अभिब्यक्ति दिने कलाकारमा पर्छन् ।खासै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना अभिब्यक्तिहरु दिने गरेका छैनन् । तर हाल उनले कडै भिडीयो सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको ८ मिनेटको यस भिडीयोमा उनले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा राजनितीक दलका नेता उदासिन देखिएको आरोप लगाएका छन् । अभिनेता राजेश हमाल सितिमिति सार्वजनिक विषयमा बोल्दैनन्। सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक वा सार्वजनिक विषयमा खासै लेख्दैनन्।आईतबार उनले भिडीयो सन्देश जारी गर्दै राजनीतिक दल र सरकारका कृयाकलापप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्– बेलायतको संसदमा नेपालले कोरोना भाइरसका कारण भोगिरहेको विपत्तिको विषयमा चर्चा चल्यो। तर हाम्रो संसदमा किन यो विषयको चर्चा मैले सुनिनँ।’ हमालले नेपाल सरकारले अहिलेको महामारीमा
मोरङको पथरी सनिस्चरे- १० मा एउटा घिनलाग्दो घटना घटेको छ । मामा भान्जी साइनो पर्ने २६ बर्षिय युवा र लगभग १६ बर्षकि युवतीबीच यस्तो काम भएको हो । स्थानियका अनुसार त्यो बेलुका २ जनानै नसामा रहेको जनाएका छन् । युवतीले आफुलाई जबर्जस्ति गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि ति युवालाइ इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले पक्राउ गरेको छ । युवकको घरमा पुग्दा यस्तो काम सहमतिमा २ जनाले नसाको सुरमा गरेका हुन्, सजाय हुँदा २ जनालाईनै हुनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका हुन् । उनलाई प्रहरीले सोहि दिन पक्राउ गरेको जनाएका छन् । ति युवकलाइ फसाउनलाइ सबैको खेल रहेको भन्दै आफन्त आक्रोशित भएका छन् । के हो त बास्तबिकता ? त्यो रात प्रत्यक्ष देख्ने दाजुले त्यहाको सबै कुरा बताएका छन् । तल भिडियोमा जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोला ।